Budada Orlistat (96829-58-2) hplc≥98% Soosaaraha & Warshadaha
/ Products / Xabbad dufan leh / Orlistat budada
Rating: SKU: 96829-58-2. Category: Xabbad dufan leh
Diyaarso sawir budo ah
Astaamaha aasaasiga ah ee dufcadda
Name: Dufanka Orlistat
Qaaciddada Molecular: C29H53NO5
Miisaanka kelli: 495.7
Dhibcaha Biyaha: 50 ° C
Magaca Badeecada: Orlistat
In ka badan kalabar dadka adduunka ayaa waligood isku dayay barnaamijka maaraynta culeyska, sida cunnada, jimicsiga, qalliinka, ama daawada. Dhammaan daaweyntan miisaanka lumintu waxay waxtar leeyihiin oo keliya haddii aad daacad u tahay oo aad raacdo tilmaamaha tan dambe. Si kastaba ha noqotee, xulashada qalliinka ama daawada waxay noqon kartaa mid waxyeello leh marka aadan qaadin taxaddarrada ugu badan.
Qaab-dhismeedka kiimikada ee Orlistat (3-D)
Qaab-dhismeedka kiimikada ee Orlistat (2-D)
Qalabka kiimikada ee Orlistat
Tirinta Atom Stereocenter Count 4
Tirada Nidaamka Atomka 35
Buuxa Mass 495.392 g / mol
Meelaha Aagga Fudud ee Foollada 81.7 A ^ 2
Tirinta Bonded Rabshadaha 23
Tirada Hydrogada Bond Acceptor 5
Miisaanka kelli 495.745 g / mol
Faahfaahin sahlan ee budada Orlistat
Mid ka mid ah daawooyinka miisaanka lumay in aad ku soo wada jeesan doonto raadintaada si aad u hesho daawooyinka maareynta miisaanka ugu haboon ee Orlistat. Dib-u-eegiskan Orlistat, waxaad ka heli doontaa macluumaad muhiim ah, oo ay ku jiraan waxa uu yahay, sida uu u shaqeeyo, iyo sida loo isticmaalo, markaa waxaad go'aamin kartaa haddii ay tahay mid ku haboon.
Orlistat, oo lagu iibiyo sida daawooyinka dhakhtarku ku qoran yahay Xenical, waa daawada miisaanka loo qaato ee miisaanka loo qaato oo loo qaabeeyey in lagu daaweeyo dhibaatooyinka culeyska sida cayilka, iyo sidoo kale xaaladaha kale ee miisaanka la xidhiidha. Waxaa laga helaa GlaxoSmithKline oo ah daroogo aan dawli ahayn oo lagu magacaabo Alli ee labadaba Maraykanka iyo Boqortooyada Ingiriiska.
Qodobada guud ee Orlistat waxaa laga heli karaa waddamo badan. Tan iyo 2000, waxaa loo aqoonsaday inay tahay daawada S3 daawada laguu iibsado ee Australia. Oggolaanshaha Orlistat oo ah daroogada ka soo horjeeda ayaa ahayd mawduuc muran leh oo ka jira Mareykanka. Waxaa si isdaba joog ah looga soo horjeeday natiijooyinka waxtarka iyo amniga ee u doodista macaamiisha ee loo yaqaano Muwaadiniinta Dadweynaha.
Ficilada Orlistat sida lipase inhibitor, taas oo guud ahaan macnaheedu yahay inay ka hortageyso nuugista dufanka cuntada, sidaas darteed waxay yareyneysaa qiyaasta kalooriyada aad qaadato. Sida dawooyin kale oo badan oo miisaan lumis ah, Orlistat waxaa loola jeedaa in la isticmaalo si loogu isticmaalo isbeddelka kale ee hab nololeedka sida jimicsiga iyo cuntada. Daraasado cilmi baaris ah ayaa muujinaya in dadka ku dhejiya isku-dhafkan ay fursad u leeyihiin inay lumiyaan laba illaa saddex kiilo oo ka badan kuwa aan daroogada ku jirin miisaankooda.
Mid ka mid ah dhinacyada la jecelyahay ee ku saabsan Orlistat waa in aysan kaliya kugu caawineyn inaad lumiso miisaan laakiin sidoo kale waxay yareyneysaa cadaadiska dhiigga. Intaa waxaa dheer, maareynta miisaanka miisaankani waxa la rumaysan yahay in looga hortago bilawga nooca sonkorowga 2 ee dadka caanaha si la mid ah sida isbeddelka hab-nololeedka uu sameeyo.
In kasta oo ay jiraan dhowr waxtar oo Orlistat ah oo lagu farxo, haddana sidoo kale waxaa jira qaar ka mid ah waxyeelooyinka Orlistat ee ah in fiiro gaar ah loo yeesho. Dhibaatada ugu badan ee la soo sheego ee kaniinkan miisaanka lumiya waa steatorrhea. Tani waa cudur caloosha ku dhaca oo lagu garto saxaro dufan leh, dabacsan. Calaamadaha, nasiib wanaag, waxay hoos u dhacaan waqtiga.
Orlistat waa ka hortag liidashada xiidmaha. Daawadani waa ka-hortag firfircoon oo ka-hortagga baruurta caloosha iyo caloosha. Daroogadu waxay sameysaa xirmo wada jir ah oo leh sagxadda firfircoon ee xammeetida iyo dufanka caloosha, sidaas ayeyna uga hortageysaa ficilkooda iyo ka-hortagga dufanka cuntada ee laga helayo hawo-biyoodka iyo nuugista. (NCI04).
Marka la eego shuruudaha fudud, Orlistat wuxuu fududeeyaa miisaanka luminta isagoo hoos u dhigaya naqshadaha xayawaanka iyo caloosha, taas oo ah enzymes muhiim ah ee mindhicirada oo burburiya triglycerides. Marka lipases-ka la xiro, hiddo-gelinta triglycerides ee cuntadaada si aad u noqotid asiidh dufan leh oo la nuucayo ayaa laga hortagayaa.
Kiniiniyada cuntada ayaa afka laga qaataa oo marba la qaato; xakamaynta lipase maxalliga ah ayaa ka dhacda habka GI. Xaddiga yar ee daroogada ayaa lagu nuugo jidhka, iyada oo inta badan daroogada la tirtiro saxarada.
Daraasadihii ugu dambeeyay ayaa laga helay Orlistat si ay awood ugu yeeshaan in la xakameeyo enzim oo ku lug leh faafinta unugyada kansarka khatarta ah. Si kastaba ha noqotee, saameynaha saameynaha daroogada (sida ka hortagga unugyada kale ee aan la xakameyn ama bioavailability xumeyn) waxay joojinaysaa isticmaalka sida wakiilka antitumor waxtar leh. Mid ka mid ah daraasadda, cilmi-baarayaashu waxay qaadeen habka kiimikada kiimikada kiimikada si ay u helaan bartilmaameedyada cusub ee gacanta ee daroogada, oo ay ku jiraan bartilmaameedyada.
Qiyaasta dawada ee caadiga ah ee 120 mg 3 jeer maalintii cuntada ka hor, ama liiska miisaanka luminta miisaanka ayaa ka hortageysa ku dhowaad 30 boqolkiiba dufanka nafaqada ee lagu nuugo jirka. Qaadashada qaadasho badan ma bixinayso saameyn xoog leh.
Orlistat waxaa loo isticmaalaa maandooriyaha maareynta miisaanka. Waa doorasho habboon dadka qaba miisaanka culus ama cayilan. Kiniiniga lumay miisaanka ayaa lagula talinayaa inay isticmaalaan dadka qaba dhibaatooyinka caafimaad ee culus. Waxay ballan-qaadeysaa in ay dadka ka caawiso miisaan la'aan, laakiin sidoo kale waxay ka caawisaa inay ka hortagto in ay dib u soo celiyaan miisaanka ay lumiyeen. Markaa sidaas waxa ay caawineysaa in la yareeyo khatarta dhiig kar, sonkorow, cudur wadne, iyo khataro caafimaad oo kale oo badan oo ku xiran cayilka.
Xaddiga miisaanka lumitaanka ka dib qaadashada Orlistat way kala duwan tahay qof qof kale. Cilmi-baarayaasha oo maamula tijaabooyinka bukaan-socodka ee sannad-sannadeedka ayaa muujiyay in inta u dhaxaysa 35.5 boqolkiiba iyo 54.8 boqolkiiba mawduucyada ay ku guuleysteen inay boqolkiiba 5 hoos u dhigaan weynaanta jirka, inkastoo dhammaan dadka lumay ay ahayd qasab daruuri. Ku saabsan 16.4% -24.8 mawduucyada ayaa lagu guuleystay in ay gaaraan ugu yaraan 10 boqolkiiba hoos u dhaca dufanka jirka. Marka maadooyinka ay istaagaan qaadashada Orlistat, tiro badan oo ka mid ah waxay heleen ilaa 35 boqolkiiba miisaanka ay ku guuleysteen.
Orlistat wuxuu ku yimaadaa qaab ah 'turquoise', kaabsallo adag oo adag oo ay ku jiraan pellets of budada culeyskiisuna yahay 120-mg. Qiyaasta lagu taliyay ee maalinlaha ah waa seddex kaabsal maalintii. Waa inaadan wada qaadanin seddexda kiniin socodba, laakiin bedelkeeda waxaad qaadaneysaa kiniin kasta oo leh cuntada ugu weyn oo dufanku ku jiro, tusaale ahaan, mid quraac ah, mid qadada ah, iyo mid casho ah. Waxaad ku qaadan kartaa kaniiniyad kasta raashin ama ilaa hal saac cuntada kadib. Haddii ay dhacdo in cuntada inta badan la seego, ama haddii cuntadaadu aysan ku jirin dufan, waa la iska dhaafi karaa qiyaasta Orlistat. Qiyaasaha ka sarreeya qiyaasta maalinlaha ah ee lagu taliyay lama helin inay bixiso waxtar dheeraad ah.
Orlistat waxay waxtar badan tahay marka la raaciyo xeelado kale oo miisaan lumis ah sida adoo ku daboolaya cunto nafaqo leh oo yar, nafaqo-yar oo kalooriye ah iyo jimicsi joogto ah. Waxaa lagugula talinayaa in aad qaadato kiniinka lumay miisaanka cuntada oo ku saabsan 30 boqolkiiba caloric ka baruurta. Saameynada daroogada waxaa loo arkaa sida ugu dhaqsaha badan saacadaha 24-48 ka dib qaadashada qiyaasta.
Orlistat waxaa la ogaaday inay wax ku ool u tahay yareynta nuugista fiitamiinnada qaarkood ee dufanka ku milma iyo beta-carotene. Sidan oo kale, dadka qaata kaniiniga waxaa lagula talinayaa inay la wadaagaan fitamiin fara badan oo ay ku jiraan fitamiino ku-milma dufanka si loo hubiyo nafaqo ku filan. Waxaa lagugula talinayaa in fiitamiin dheeri ah la qaato ugu yaraan laba saacadood ka hor ama ka dib qaadashada Orlistat.
Sida bukaanka qaata daaweynta salka loo yaqaan 'cyclosporine', waxaa lagula talinayaa inay maamulaan wareegga wareegga ugu yaraan saacadaha 3 ka dib markii ay qaataan Orlistat. Kuwa qaata daaweynta levothyroxine, waxaa lagu dhiirigelinayaa inay maamulaan daaweynta levothyroxine ugu yaraan saacadaha 4 ka dib marka ay qaataan Orlistat. Kuwa qaadanaya Orlistat iyo levothyroxine labadaba waa in si taxadar leh loo fiiriyaa isbedelka hawlaha qanjirada.
Markii hore, orlistat si adag ayaa loo qaaday markii loo qoro dhakhtarka ama farmashiistaha. Si kastaba ha noqotee, 2007, Maamulka Cuntada iyo Dawooyinka ee Mareykanka ayaa u ansixiyay suuqa suuqyada ka baxsan, sidaas awgeed, iyada oo qof walba loo heli karo.
Iska hubi waxyeellooyinka xasaasiyadda
Ka hor intaadan qaadin daawadan, waxaa lagugula talinayaa inaad kala hadashid dhakhtarkaaga wixii ah dareen-celin-celin-xumo oo aad la kulmi karto. Orlistat waxaa ku jira waxyaabo aan firfircoonayn, kuwaas oo aan kuu fiicneyn, taasoo keeneysa falcelinta xasaasiyadeed ee daran iyo waxyeelooyinka. Qaar ka mid ah waxaa ka mid ah cellulose, microcrystalline, gelatin, silica, iyo soodhiyam gaaskolate.
Tixgeli taariikhdaada caafimaad
Waxaad u baahan tahay inaad la wadaagto farmashiistahaaga ama takhtarkaaga wixii ku saabsan xaalad kasta oo caafimaad ee laga yaabo inaad yeelato. Tani waa sababta oo ah liisku waa ka horjeeda isbeddellada iyo dhibaatooyinka gaarka ah, gaar ahaan kuwa la xidhiidha dheefshiidka.
Haddii aad ku xanuunsato mid ka mid ah shuruudaha hoos ku qoran, waxaa lagugula talinayaa in aad raadsato aragti dheeraad ah xirfadle.
Tani waa wax aan caadi ahayn oo masuul ka ah nuugista cuntada aan ku filnayn cuntada nafaqada ee nidaamka GIT. Waa inaad ogaataa in liiska uu isagu ka shaqeynayo in la joojiyo dheefshiidka dufanka. Sidaa daraadeed, tani waxay ku dhamaan doontaa inay noqoto mid naxdin leh qofkasta oo qaata daroogada, hase yeeshee waxay ku dhacaan cudurka malabsorption syndrome.
Xanuunka beerka ama cholestasis
Tani waa xaalad ay jirto joojinta qulqulka qulqulka ee beerka. Waxaa jira warbixino dhowr ah oo iskuxiraya ama liiska ujaraya dhaawaca daran ee beerka, in kastoo ay ku dhacdo xaalado dhif ah ama qiyaasta sare.
Taas waxaa ka mid ah xinjirta (cholecystectomy) iyo cudurrada la xidhiidha.
Xaaladaha kale ee caafimaad ee aad u baahan tahay inaad u sheegto farmashiiyahaaga waxaa ka mid ah infakshanka HIV, cudurada thyroid, dhagxaan kellida, qalalaasaha, ama feeraceitis. Suuxdin ama qalalaaso, ama liiska waxaa laga yaabaa inay ku dhammaato barbaarinta daaweynta antiepileptic iyadoo la faragalinayo nuugista.
Qaar ka mid ah cuduradaan waa bulimia iyo anorexia. Sidoo kale, looma baahna inaad qaadato liiska haddii aadan culeyskaagu ahayn.
Way fiicantahay inaad u sheegto dhakhtarkaaga haddii aad ku jirto daawooyin kale gaar ahaan kuwa ay u badan tahay inay xakameeyaan nidaamka difaaca jirka. Isdhexgalka daroogada daroogada ayaa faragalin doonta farmasokokinetics, taasoo horseedi doonta saameyn koror ama hoos u dhac ah midkoodna. Tusaale ahaan, liiska ayaa had iyo jeer faragalin ku sameeya habka daawooyinka loogu qoro xubin jirka.
Haddii aad ku socoto socodka wareegga, dhakhtarkaagu wuxuu kuu sheegi doonaa inaad iska ilaaliso liiska. Si kastaba ha ahaatee, waad wali wadi kartaa oo kaliya talooyinka adag. Si aad u noqotid dhinaca ammaanka, waa inaad qaadataa ugu yaraan laba saacadood kahor intaadan daawadan maareynta miisaanka ama laba saacadood kadib.
Intaas waxaa sii dheer, waa inaad xusuusataa dhammaan daawooyinka rijeetada iyo daawooyinka aan takhtarku qorin, dheellitirka cuntada, fiitamiinada, daawada xinjirowga lidka ku ah, ama alaabta dhirta laga yaabo in aad qaadato.
Haweenka uurka leh iyo naas nuujinta
Dawadan maareynta miisaanka ma aha hooyooyinka uurka leh, qof kasta oo qorsheynaya inuu uuraysto, ama naas nuujinta. Daawada lama filaan ah in ay leedahay saamayn miisaan lumis ah waxayna ku dhamaan doontaa dhibaatada uur-jiifka.
Inkastoo aysan weli caddayn in haddii liisku uu u gudbiyo naasaha hooyada, waa inaad ka fogaato oo aad dareento amaan, marka aad ka xun tahay.
Orlistat waa waxa qof kasta oo qaba sonkorowga uu u baahan yahay inuu hagaajiyo loona xakameeyo sonkorta dhiigga iyo in la horumariyo dulqaadka sonkorta. Si kastaba ha ahaatee, waa inaad la socotaa heerarka sonkorta si joogto ah oo aad ugu tagto dhakhtarka. Tani waxay kaa caawineysaa inaad ogaato goorta aad u habeyn lahayd daawada sonkorowga, cuntada saxda ah, iyo barnaamijka jimicsiga si aad u qaadato.
Sida daaweynta badankeeda, ama liisku waxay leedahay saameyntooda. Waxyeelada asaasiga ah ee asaasiga ah marwalba waa lagu fiiriyaa caadooyinka mindhicirka. Si kastaba ha ahaatee, tani waxay noqon kartaa oo kaliya la dareemo inta lagu jiro todobaadyada ugu horeeya ee qaadashada maan-dooriyaha miisaanka.
Dadka qaarkiis, calaamadaha ayaa laga yaabaa inay ku sii socdaan halka kuwa kale; waxay sii wadi kartaa intaad qaadaneyso liiska. Waqtigan xaadirka ah, waxaa haboon in la wargeliyo dhakhtarkaaga. Cuntada aad uqalantay waa inaad cuntaa dufanka yar-yar, waxay u badantahay in ay tahay waxyeellada daawada ee lagu yareeyo.
Waa kuwan waxyeelo caadi ah;
In kasta oo aan wax khasaare ah lahayn, steatorrhea waa joogitaanka saliidda iyo dufanka xad-dhaafka ah ee saxarada. Maadaama ay liisku liin yahiin lipases, ma jiri doonaan nuugista asiidh dufan bilaash ah. Sidaas awgeed, saxarada ayaa u muuqda kuwo si sahlan u muuqda.
Si loo xakameeyo saamaynta, mid waa inuu iska ilaaliyaa cuntooyinka hodanka ku ah kalooriyada iyo heerarka dufanka badan. Marka la eego shuruudaha FDA, qaddarka waa in uu ku jiraa 0.53 wiqiyadood oo aan ka badnayn 30%.
Xaaladaha badankood, gaasku wuxuu ka baxaa dheecaanka saliidda. Waa inaad fiirisid dharkaaga ama dharkaaga si aad u raadisid raadadka oilyada.
Cunsurin la'aanta kaadida
Dhaqdhaqaaqyo liidan, degdeg ah, iyo dhaqdhaqaaqa joogtada ah
Xanuun iyo xanuunka caloosha
Saacad caadada ah oo aan caadi ahayn
Heerarka sonkorta dhiiga ee hooseeya
Tani waxay caadi ahaan ka dhexeysaa shakhsiyaadka leh nooca sonkorowga II.
Dhaawac beerka oo daran
Xaaladaha noocan oo kale ah waa dhif laakiin waxay dhacayaan markaad waxoogaa dhibaatooyin beerka ah oo hooseysa, ama aad qaadato qadar sare. Sannadkii 2010, FDA waxay ku dartay digniin nabadgelyo oo ku saabsan calaamadaha liiska, taas oo muujineysa halista suurtagalnimada dhaawacyada beerka.
Si kastaba ha noqotee, saameyntan dhinaca ah ayaa weli ah dood la tixgelinayo in daraasad kale oo kiis ah oo lagu daabacay joornaalka Caafimaadka Ingiriiska ay si kale u muujisay.
Qaar ka mid ah calaamadaha digniinta ee cudurka beerka waxaa ka mid ah matag, xanuunka caloosha, maqaarka hurdi, iyo kaadida madow.
Aad bay u yartahay in la dareemo cilad-celin ama dareen-celin xasaasiyadeed markaad qaadato liiska kiniinka lumay. Dadka qaarkiis, maaddooyinka aan firfircooneyn ee laga helo daroogada waxay kicin karaan lallabbo, cuncun, firiiric, barar jirka, neefta oo adkaata, ama dawakh.
Waxyeelooyinka kale ee aan badnayn ee caamka ah waxaa ka mid ah walwal, madax xanuun, calool istaag, raaxo la'aan futada, daal, cunno yari, iyo caloosha. Haddii aad isku aragto astaamaha daran, waa inaad isla markaaba u sheegtaa dhakhtarkaaga ama aad u soo warbixisaa Barnaamijka Warbixinta ee FDA.
Xukunka kama dambaysta ah ee budada Orlistat
In kasta oo liisku uu leeyahay waxyeelo yar, waa daaweyn miisaanka oo aad u fiican oo keenaya natiijooyinka laba toddobaad gudahood. Qarsoonaanta ka faa'iidaysashada daroogadan ayaa raacaysa tilmaamaha, fahamka taxaddarrada, iyo hubinta cuntadaada.
Markaad qaadato liiska, waxaa muhiim ah in la raaco barnaamijka nafaqada saxda ah, isticmaala dufanka yar, kalooriyeyaasha yar, iyo jimicsi si joogto ah. Cunto sax ah waa inay ku jirtaa miraha, khudradda, iyo badarka. Intaa waxaa dheer, waa inaad cuntadaada ku darsataa waxyaabaha muhiimka ah ee loo yaqaan 'multivitamiin' tan iyo markii ay liis-darro ku dhufteen vitamins-ka-baruurta.
Markaad shaki ka qabtid, waxaad la xiriiri kartaa farmashiistahaaga ama dhakhtarkaaga tilmaamo dheeraad ah. Haddii kale, waxaad la xiriiri kartaa Maamulka Cuntada iyo Dawooyinka ee Maraykanka wixii su'aalo ah ama soo sheegida waxyeelooyinka nolosha khatar geliya, kuwaas oo aan lagu taxeyn.
Sidee si ay u iibsadaan Dufanka Orlistat (96829-58-2) laga bilaabo AASraw